आफ्ना बुवाको ह,त्या गर्ने दुई लडाकु मा रेर चर्चित बनेकी यी किशोरी,चर्चामा – Sanchar Patrika
आफ्ना बुवाको ह,त्या गर्ने दुई लडाकु मा रेर चर्चित बनेकी यी किशोरी,चर्चामा
July 22, 2020 208
गत साता आफ्ना अभिभावकको ह त्या गर्ने तालिबान ल डाकुहरूसँग भिडेकोमा अफगानिस्तानकी एक किशोरी समाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेकी छन्। अफगानिस्तानको घोर प्रान्तका अधिकारीहरूका अनुसार ती किशोरीले परिवारको एके-४७ राइफल लिएर दुई ल डाकुलाई मा रिदिएकी थिइन्। उक्त घ टनामा अन्य कैयौँ घा इते भएका थिए।
किशोरीका बुवा सरकार समर्थक रहेकाले तालिबानहरू उनको घरमा गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।कलिलो उमेरपछिल्ला दिनहरूमा राइफल समातेको युवतीको फोटो भा इरल भएको छ। उक्त घ टनापछि ग्रिवा गाउँमा रहेको उनको घरमा आ क्रमण गर्न थप ल डाकु पुगेका थिए।तर उनीहरू स्थानीय बासिन्दा र सरकार पक्षीय लडाकुहरूको आ क्रमणमा परेका थिए।अफगानिस्तान द्व न्द्वको कहालीलाग्दो तस्बिर अफगानिस्तानको द्व न्द्वमा गत वर्ष सर्वाधिक गैरसैनिकको मृ त्यु
‘अमेरिकाले धुइँपत्ताल खोज्थ्यो, तालिबान नेता ओमार अमेरिकी सैनिक इलाकानजिकै बस्थे’ अधिकारीहरूले किशोरी १४ देखि १६ वर्ष उमेरको हुनसक्ने ठानिएको र उनका भाइलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले किशोरीको प्रशंसा गरेका छन्।
समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार नजिबा रह्मीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “उनको हिम्मतलाई सलाम छ।”
फेसबुकमै मोहमद सलेहले टिप्पणी गरेका छन्, “हामीलाई थाहा छ, अभिभावक गुमाउनुको वियोग अपूरणीय हुन्छ, तर तिमीले लिएको बदलाले तुलनात्मक रूपमा शान्ति दिनेछ।” स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घोर पश्चिमी अफगानिस्तानको निकै अविकसित प्रान्त हो। त्यहाँ महिलावि रुद्धको हिं सा निकै उच्च छ।
तालिबानले गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकासँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर उसका कैयौँ सदस्यहरूले अझै पनि अफगानिस्तानको वर्तमान सरकार र संविधानको अन्त्य गर्न आग्रह जारी राखेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस, काठमाण्डौ – आजदेखि ल कडाउन हटेको छ । चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको ल कडाउन गएराति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको हो । आजदेखि सरकारी कार्यालयहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै सञ्चालन गर्ने र गाडीको जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
Prevआजबाट लकडाउन अन्त्य : के-के गर्न पाइन्छ ? के-के पाइँदैन ?
Nextलकडाउन खुलेकै दिन आयो दुखद खबर-नेपालमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मृ,त्यु
भर्खर आयो यस्तो अप्रत्याशित खबर,३ करोड नेपाली जनतालाई दुखी गराउने खबर